6 Kheyraadka Naqshadeynta Naqshadeynta si aad u soo Degsato Bilaash | Abuurista khadka tooska ah
Shaqada naqshadeynta qaabdhismeedka waxaa lagu qaabeeyey dhammaan ilaha qofka uu ku takhasusay qaybtaan aqoonta uu leeyahay oo waliba, marka lagu daro, ay isticmaali karaan marka ay qabanayaan dhammaan shaqadooda. Kheyraadka noocan ah waxay si cad ugu xirnaan doontaa nooca shaqada la qabanayo, iyo sidoo kale waqtiga, macnaha guud iyo nooca shirkadda ama macmiilka uu qofku u shaqeynayo. Macnaha noocan ah waxaa lagu qeexay sida soo socota waana inay noqon doontaa shirkadda taas go'aamiso nooca ilaha aad isticmaali karto naqshadeeyaha garaafka ee shaqadaada oo dhan.
Waxaa jira dhowr ah ilaha laga heli karo shabakadda, oo loo adeegsado xilligaas shaqada ka dib, oo aan mar hore ku dhammaysan lahayn shaqadeenna, taas oo diyaar u noqon lahayd in la keeno. Halkan waxaan ku soo bandhigeynaa 6 kheyraad inaad u isticmaali karto naqshadeynta, taas oo sidoo kale lagu soo dejisan karo bilaash, taas oo u oggolaaneysa xirfadlayaasha iyo hiwaayadda inay siiyaan taabasho rasmi ah dhammaan mashaariicdooda marka la eego soo bandhigiddooda, habka iyo qaababka.
1 Dareenkan, 6dan kheyraad waxaa loo fahmay loona sharxay sida soo socota:
1.1 Gacan guridda
1.2 Jees naqshadeyntaada boorso
1.3 Jeesjeexyada DinA4
1.4 90s farsamada
1.5 Mockup: aqoonsigaaga shirkadda
1.6 Astaamo leh astaamo guridda
Dareenkan, 6dan kheyraad waxaa loo fahmay loona sharxay sida soo socota:
Asal ahaan, kheyraadkani wuxuu ka kooban yahay gacanta aadanaha, samaynta qodob, gacan qaadid, salaamid qof (akhristaha), qabashada shay ... iwm. In kasta oo ay abuuri karto dareen qaboojin ah, runtu waxay tahay inay aad caan ugu tahay shaqooyin badan oo naqshadeynta ah, taas oo, waxay u noqotaa inay tahay ilo si caddaalad ah loo yaqaan oo saaxiibtinimo ku dhex leh adduunka naqshadeynta garaafka.
Soo qaado halkan
Jees naqshadeyntaada boorso
Noocyada noocan oo kale ah waxay ka jawaabaan awoodda aad ugu gudbi karto astaantaada badeecad sawir leh, taas oo, Xaaladdan oo kale, isticmaaleyaashu waxay awoodi doonaan inay ka gudbaan astaanta astaanta bacda, Maareynta si looga qiimeeyo aragtida ganacsi ee badan, ku fiirsashada badeecada inta badan loo isticmaalo dacaayadaha noocyo badan.
Tani waa mid ka mid ah ilaha loogu tala galay dadka doonaya inay horumariyaan a soo bandhigid xarrago leh iyo sida ugu habboon ee suurtogalka ah. Noocyadaan moodooyinka ah guud ahaan waxaa loo isticmaalaa manhajka, bandhigyo ama xitaa casuumaad dhacdo. Dukumiintiga noocan ah waxaa suurtagal ah in dukumiinti lagu macneeyo qaabka ugu xirfada badan ee suurtogalka ah.
Baakadani waxaa ku jira noocyo kala duwan oo astaamo ah oo lagu dejiyey 90-meeyadii, kuwa ku caashaqay waqtigan si astaan ​​u ah dalal badan. Kheyraadkaas ayaa loo isticmaali karaa shaqooyinka la xiriira noocan dhaqanka laga bilaabo waqtigaas. Waxay fure u noqon kartaa qancinta macaamil aan go'aan lahayn oo ku saabsan shaqadaada, iyo sidoo kale inay tahay habka ugu xasilloon ee lagu siinayo macnaha shaqada naqshadeynta.
Mockup: aqoonsigaaga shirkadda
Ma qiyaasi kartaa astaantaada qaab shirkadeed? Haddii jawaabtaadu ay shardi u tahay fursadaha aad ku qaban karto shaqadan noocan ah calaamaddaada, jees jeeskani waa furaha lama huraanka u ah in la awoodo in laga dhigo astaanta naqshadeeye wax aad u xirfad badan¸ dadka xiiseynaya shaqo ku qaban qaababka rasmiga ah iyo tan xirfadeed ee suurtogalka ah.
Astaamo leh astaamo guridda
Guud ahaan, waxaa jira xaalado badan oo u baahan soo bandhigid sida ugu xirfadaysan intii suurtagal ah.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jiri doona xaalado u baahan doona ka soo horjeedka, taas oo, Noocyada noocan ah waxay isu rogi karaan inay noqdaan moodello aad ugu habboon baahiyahayaga ka soo baxa duruufaha xirfadeed laakiin aan u qurux badnayn sidii aannu guud ahaan u baran jirnay ka fiirsashada.
Kuwani waa qaar ka mid ah kheyraadka aan ka heli karno shabakadda, taas oo noo oggolaaneysa inaan ku qabanno shaqadeena habka ugu hufan ee suurtagalka ah, sidoo kale, inaan helno dhammaan walxaha ay soo bandhigeennu u baahan karaan in lagu qaado. dhammaan shaqadeena sida ugu macquulsan uguna macquulsan uguna macquulsan dhammaan noocyada duruufaha ku jira, bandhiggu wuxuu muhiim u yahay waxqabadkayaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » 6 ilaha qaabeynta qaabdhismeedka bilaashka ah si loo soo dejiyo Luulyo